Dagaal Dhiig badan ku daatay oo u dhaxeeya Beelaha Habar Gidir iyo Biiyomaal oo kasocda Gobolka Sh/Hoose | Salaan Media
Home Wararka Dagaal Dhiig badan ku daatay oo u dhaxeeya Beelaha Habar Gidir iyo...
Dagaal Dhiig badan ku daatay oo u dhaxeeya Beelaha Habar Gidir iyo Biiyomaal oo kasocda Gobolka Sh/Hoose
Wararka aan ka heleyno Deegaanka Ceel-Wareegow ee Gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in halkaasi uu kasocdo dagaal culus oo u dhaxeeya labo beelood oo wada Daga Gobolka Sh/Hoose maalmihii ugu dambeeyana u dhaxeesay xurguf Colaadeed.
Dagaalka ayaa qarxay kadib markii maleeshiyo beeleed ay weerareen Gudoomiyaha Deegaanka Ceel-Wareegow waxaana xiligaasi kadib dagaalku uu noqday mid sii xoogeesta oo qaab qabiil isku badala.
Ciidamada Dowlada Soomaaliya ee kusugan Qeybo kamid ah Gobolka Sh/Hoose ayaa si toos ah dagaalka uga qeyb qaadanaya kuwaas oo la kala safan labada Maleeshiyo beeleed uu dagaalku u dhaxeeyo.
Dagaalka ayaa ah mid mudooyinkan ka dhacayay deegaano kala duwan oo kuyaala Gobolka Sh/Hoose waxa uuna u dhaxeeyaa Beelaha Biiyamaal iyo Habar Gadir iyadoona ayna jiraan xubno Odayaal ah iyo xildhibaano Dowlada katirsan oo hurinayay colaada gobolka kasocda ee u dhaxeeya labada Beelood.
Gudoomiyaha Degmada Marka oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalka socda ay ku dhinteen dad tiro badan iminkana ay kusii jeedaan isaga iyo masuuliyiin kale halka uu dagaalka kasocdo si ay u kala dhax galaan labada ciidan ee dagaalamaya.
Dowlada Soomaaliya ayaan wali ka hadlin dagaalada soo noq noqday ee ka dhacayay qeybo kamid ah Gobolka Sh/Hoose kaa ay si toos ah uga qeyb galayeen ciidamo wata dareeska ciidanka oo lakala saftay Beelahooda Hubkii qarankana u adeegsaday Dagaal beeleed.